China Bundling firimu, rinoputirwa kuputira, anotambanudza kuputira kubata Anotsigira
Bopp Tape Jumbo Rinotenderera
Tsanangudzo:Bundling firimu,kuputira kwemaoko,kutambanudza kuputira mubato,ruoko roll anotambanudza firimu,,
Machine Kutambanudza Firimu
Ruoko Rutambanudza Firimu
Colored Stretch Firimu
Mhepo Yekutakura Sheet
Plastiki Kudonha Mucheka
Krisimasi Muti Kurasa Bhegi
 HomeProductsTambanudza FirimuBundling Firimu
Bundling Firimu (Total 50 Products)
Zvigadzirwa zve Bundling Firimu , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Bundling firimu , kuputira kwemaoko vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve kutambanudza kuputira mubato R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Vacheche Kutenderera Mini Kutambanudza Firimu
Mini Ruoko Rutambanudza Kuputira
Kurongedza Kuputira neHandle
Tambanudza Firimu Rekuputira Mukwende
Ruoko shandisa kurongedza akatambanudza firimu kuputira roll
Nhema ruoko rwokuputira bundling firimu
18 x 1500 pallet yekuputira mubato
Handy kuputira bundling firimu
Ruoko rwakatambanudza rinoputira bunnings
Handy kuputira anotambanudza firimu
Mini anotambanudza akaputira rolls
PE yakanakira kuputira bundling yakatambanudza firimu
Hwakanaka mhando Mini anotambanudza firimu akabata
Ruoko rwakatambanudzwa firimu ukobvu gauge yepurasitiki firimu
Kugadziridza Handy Pe Kutambanudza Kuputira Firimu Nekubata
Blue Handle inotambanudza inoputira kuputira
Mutsva wemuenzaniso unotambanudza firimu ine ruvara mubato
Kubhururuka mapurasitiki ane mavara anofamba anotambanudza jira firimu
Ruvara anotambanudza firimu nebato
Chitsva chigadzirwa Handle inotambanudza firimu ruoko kuputira roll
Mini Kutambanudza Kuputira Firimu
Kupa Mazano: 400 tons/months
Vacheche Kutenderera Mini Kutambanudza Firimu Yedu Yevacheche Kutenderera Mini Kutambanudza Firimu ine mhando mbiri, imwe ine mubato wayo uye imwe ine chinotsiviwa mubato. Kazhinji kutaura, kana iwe ukauya neyako yekubata, ichave iri nyore...
Mini Ruoko Rutambanudza Kuputira Mushure mevatengi vazhinji vatenga yedu Mini Ruoko Kutambanudza Kuputira, ivo vanobvunza kana iro ruvara rwechibatiso rungagadziriswe. Mhinduro ndeyokuti hungu. Zvese zvinhu zvedu zvinogadziriswa. Ruvara rwekubata...
Kurongedza Kuputira neHandle Kurongedza Kuputira neHandle Mushure mekunge vatengi vazhinji vatenga yedu yekuPutira Yekuputira neHandle, ivo vanobvunza kana iro ruvara rwechibatiso rungagadziriswe. Mhinduro ndeyokuti hungu. Zvese zvinhu zvedu...
Tambanudza Firimu Rekuputira Mukwende Kavha Yekutambanudza Firimu Mushure mevatengi vazhinji vatenga yedu Yekutambanudza Firimu Yekuputira Mikwende, ivo vanobvunza kana iro ruvara rwechibatiso rungagadziriswe. Mhinduro ndeyokuti hungu. Zvese zvinhu...
PE kurongedza epurasitiki anotambanudza shrink kuputira firimu Packaging Kutambanudza Firimu uchishandisa pre Kutambanudza nzira, kushandisa yakawandisa kufunga uye inowanikwa maindasitiri, kutengesa, epamba, zvekurima uye kumwe kurongedza...
Hwakanaka mhando mini anotambanudza wakapeta rolls Iro rinoputira rinotambanudza firimu rinopeta zvakanakira: Iyo inogona kushandiswa kuchengetedza fenicha yemucheka kubva kumatanda, mabvu, zvimedu uye tsvina. Nekunamatira kwakasimba uye kupokana...
Hwakanaka mhando mini anotambanudza unoputira rolls Iro rinoputira rinotambanudza firimu rinopeta zvakanakira: Inogona kushandiswa kuchengetedza fenicha yemucheka kubva pamatanda, mitswe, kukwenya, uye tsvina. Nekunamatira kwakasimba uye kupokana...
Hwakanaka mhando mini anotambanudza unoputira rolls Handy kuputira anotambanudza firimu rinopeta zvakanakira: Iyo inogona kushandiswa kuchengetedza fenicha yemucheka kubva kumatanda, mabvu, zvimedu uye tsvina. Nekunamatira kwakasimba uye kupokana...
Hwakanaka mhando mini anotambanudza wakapeta rolls Mini yakatambanudza kuputira rinopeta zvakanakira: Iyo inogona kushandiswa kuchengetedza fenicha yemucheka kubva kumatanda, mabvu, zvimedu uye tsvina. Nekunamatira kwakasimba uye kupokana kwakasimba...
Hwakanaka mhando mini anotambanudza wakapeta rolls Mini anotutira kuputira zvakanaka: Iyo inogona kushandiswa kuchengetedza fenicha yemucheka kubva kumatanda, mabvu, zvimedu uye tsvina. Nekunamatira kwakasimba uye kupokana kwakasimba kwemisodzi,...
Ruvara anotambanudza firimu nebato Betsero: (1) Zvese zvigadzirwa zvedu 100% yakachena LLDPE. Saka hunhu hwedu hwaigona kuvimbiswa. (2) Kuchengetedza mutengo uye kubata nguva (3) Yakatangira tekinoroji nemidziyo (4) Zviratidzo zvikuru...
Kugadziridza Handy Pe Kutambanudza Kuputira Firimu Nekubata Adhiriages: (1) Zvese zvigadzirwa zvedu 100% yakachena LLDPE. Saka hunhu hwedu hwaigona kuvimbiswa. (2) Kuchengetedza mutengo uye kubata nguva (3) Yakatangira tekinoroji nemidziyo (4)...
Blue Handle inotambanudza inoputira kuputira Unhu: 1, yakasimba kusimba, kuwonekera, uye yakasimba simba neyakajeka gloss 2, iyo chivakwa chemukati chakasendama uye kusendama-kunamatira 3, kurema kwechirebvu, hutete hwakakora 4, kubvarura kwakasimba...
Adhiriages: (1) Zvese zvigadzirwa zvedu 100% yakachena LLDPE. Saka hunhu hwedu hwaigona kuvimbiswa. (2) Kuchengetedza mutengo uye kubata nguva (3) Yakatangira tekinoroji nemidziyo (4) Zviratidzo zvikuru zvekuchengetedza zvinhu kubva kumanyoro, ngura...
Kubhururuka mapurasitiki ane mavara anofamba anotambanudza jira firimu Bundling yakatambanudzwa firimu ine ruoko munenge munzvimbo dzese pamba kana kubasa, kufambisa mapurasitiki ekupfekedza haisi adhesives senge kana unopinza miphete kunge tepi...
Chitsva chigadzirwa Handle inotambanudza firimu ruoko kuputira roll Betsero: (1) Zvese zvigadzirwa zvedu 100% yakachena LLDPE. Saka hunhu hwedu hwaigona kuvimbiswa. (2) Kuchengetedza mutengo uye kubata nguva (3) Yakatangira tekinoroji nemidziyo (4)...
Mini Kutambanudza Kuputira Firimu Isu takakosha zvinhu kubva kuExxmmobile, ironlocene inowedzerwa kuvimbisa yakakwirira kutambanudza uye kusimbisa kubvarura kupokana. Item Width Thickness Net Weight Elongation Pull force Resistance Hand use stretch...
China Bundling Firimu Vatengi
Bundling Firimu ndiye mucheche roll Reka Bhaisikopo, iro rakanakisa firimu kana iwe uri kutarisa kudzikisa -geji chishandiso kana chishuvo chepamusoro kwazvo pre-yakatambanudzwa. Iyi firimu ndeyemhando yepamusoro-yekuita, yakakanda co-extruded firimu yakagadzirwa kubva kune yakakwirira tekinoroji maini. Simba rakakwidziridzwa uye neruoko rwekutambanudza rinoreva mini mum firimu rekushandisa apo ichipa wakakura mutoro-unobata pamitoro isingaite.
Machine giredhi anotambanudza firimu
Ruvara bhandi epurasitiki PP kurongedza tambo
Yemahara Mharidzo Yakajeka Bopp Tepi Kutenderera
Bvisa purasitiki yakatambanuka yekuputira firimu rekufamba
Ruoko & Muchina Use Tambanudza Firimu Ruvara
Tsika Yakadhindwa BOPP Kurongedza Tepi NeLOGO
Hwemhando yepamusoro Colored packing chisimbiso tepi
Plastiki simbi inobvarura pet strap bhendi
Polypropylene kurongedza tambo yepurasitiki tambo
Pe Ruoko Ruoko Pallet Kuputira Roll
Pet poly yepurasitiki pallet inosungira bhandi
Bundling firimu kuputira kwemaoko kutambanudza kuputira mubato ruoko roll anotambanudza firimu Bundling film
Copyright © 2021 Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.